प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा पहिलो पटक ‘फाइमोसिस’ सेवा शुरु - Health Today Nepal
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा पहिलो पटक ‘फाइमोसिस’ सेवा शुरु
May 16th, 2019 आयुर्वेद0comments
दाङ,२ जेठः दाङको तुलसीपुर–१९ बिजौरीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले पहिलो पटक ‘फाइमोसिस’ सेवा सुरु गरेको छ । एक जना बच्चालाई लागेको ‘फाइमोसिस’ रोगको सफल शल्यक्रिया गरी उक्त सेवाको सुरुवात गरेको हो । बच्चाको लिङ्ग नखुल्ने उक्त रोगलाई आयुर्वेद पद्धति सर्कमसिजनमार्फत उपचार गर्न थालिएको हो । अस्पतालका प्रमुख तथा बालरोग विशेषज्ञ डा रामकामेश्वर ठाकुरसहित पाँच चिकित्सकसहितको टोलीले उक्त रोगको सफल शल्यक्रिया गरेको हो । डा.ठाकुरले भनेः‘अस्पतालमा लिङ्ग नखुल्ने बच्चाको सङ्ख्या धेरै आउन थाल्यो,त्यसैले हामीले यो सेवा पनि शुरु गरेका हौँ ।’
आयुर्वेदको यो पुरानो पद्धति भए पनि प्रादेशिक आयुर्वेदमा पहिलोपटक शुरु भएको डा ठाकुर जानकारी दिए । यो सेवा शुरु भएसँगै दैनिक दुई÷तीन तथा कहिलेकाहीँ पाँच जनासम्म आउने गरेको उनको भनाइ छ । उक्त शल्यक्रिया १० वर्षसम्मका बच्चालाई गर्न सकिने डा ठाकुरको भनाइ छ । चिकित्सालयले यसको उपचार शुल्क रु दुई हजार मात्रै लिने गरेको छ । साथै उक्त शल्यक्रिया गर्नका लागि विभिन्न औजार पनि भित्रिसकेको भन्दै ती औजार खरीद भएमा थप सहजता हुने अस्पतालले जनाएको छ ।
दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ निवासी सपना घर्तीले आफ्नो छोराको उक्त समस्या समाधानका लागि घोराहीको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गइन् । त्यहाँ शल्यक्रिया गरेको रु आठ हजार लाग्ने भनेपछि केही स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा प्रादेशिक आयुर्वेद औषधालयमा ल्याउइन् । यहाँ ल्याएपछि सफल शल्यक्रिया भएको हो । चिकित्सालयले उनका छोराको पहिलोपटक शल्यक्रिया गरेको हो ।
के हो फाइमोसिस ?
बच्चा (पुरुष) को जनेन्द्रीय अर्थात् लिङ्गको टुप्पाको डल्लो (सुपाडी) लाई छालाले छोप्ने अवस्थालाई ‘फाइमोसिस’ भनिन्छ । जन्मदाखेरि कुनै पनि बच्चाको लिङ्गको टुप्पाको छाला पछाडि जाँदैन अर्थात् छालाले टुप्पो छोपेको हुन्छ । भर्खर जन्मेका बच्चामा यस्तो समस्या हुनु स्वाभाविक हो ।
तर उमेर बढ्दै जाँदा त्यो खुल्दै जानुपर्छ । जन्मेको छ महीनापछि आफसेआफ लिङ्गको टुप्पाको छाला पछाडि सर्किनु पर्छ । अर्थात् खुल्दै जानुपर्छ र लिङ्गको टुप्पाको डल्लो अर्थात् सुपाडी देखिनुपर्ने हुन्छ । तर आजकल धेरै बच्चामा फाइमोसिस समस्या देखिने गरेको छ । जसले गर्दा बच्चामा पिसावको सङ्क्रमण हुँदै मिर्गौलाको सङ्क्रमणसम्म हुन्छ ।(रासस)
Previous article गर्मी बढेसँगै महाकाली अञ्चल अस्पतालमा बिरामीको चाप
Next article बिर्सने रोग (डिमेन्सिया) बाट बच्न के गर्ने ? यस्तो भन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका
आयुर्वेदबाट घातक रोगको उपचार
सिहदरवार वैद्यखाना पनि चाडै जिएमपीमा
आयुर्वेद उपचार पद्धति भरपर्दो